मलेसियाबाट आएको शव बुझ्न एयरपोर्ट पुगेका नानीबाबुसहित एक परिवार भावविह्वल !:: Mero Desh
Published on: ९ श्रावण २०७८, शनिबार १३:५२
काठमाण्डाै / राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को जहाज मार्फत मलेसियाबाट २४ वटा नेपालीको शव नेपाल ल्याइएको छ । मलेसियामा रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका अभिभावकको श”व जहाजले शनिबार ल्याइदिएपछि
त्रिभुवन विमानस्थलमा भावविह्वल भएका साना नानी बाबुसहित एक परिवार ! निगमको वाइड बडी ए ३३० जहाजले मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरबाट एकै पटक २४ वटा शव र तीन वटा अस्तु नेपाल ल्याएको हो।
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा विभिन्न समयमा ज्यान गुमाएका नेपालीको शव बिहान वाइडबडी जहाजमार्फत नेपाल ल्याइएको निगमको उडान सञ्चालन विभागले जानकारी दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको समन्वयमा नेपाल ल्याइएका ती शव आजै आफन्तलाई जिम्मा लगाइएको छ ।
यो पनि,,स्रोत नखुलेको ४० लाखसहित झापामा एक जना पक्रा’उ
९ साउन, काठमाडौं । झापामा स्रोत नखुलेको ४० लाख ३७ हजार रुपैयाँसहित प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । शनिबार दिउँसो १२ बजे झापा गाउँपालिका- २ बेलाईतिवारीबाट स्थानीय ५० को गौरी मण्डललाई भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको ४० लाख ३७ हजार ६७० रुपैयाँसहित पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय कुमरखोदबाट खटिए को प्रहरी टोलीले मण्डललाई पक्राउ गरेको हो । उनलाई थप अनुसन्धान तथा कानुनी प्रकृया को लागि भद्रपुर भन्सार कार्यालयमा बुझाइने जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
यो पनि,,राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने षड्यन्त्र नगर्न देउवा–प्रचण्डलाई महेश बस्नेतको चेतावनी, एमाले फुटा उने अध्यादेश ल्याईए देशभरि आगो बाल्ने।भिडियो सहित)
काठमाडौं, ९ साउन । नेकपा (एमाले) का नेता महेश बस्नेतले आफ्नो पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याईए देशभरि आगो बाल्ने चेतावनी दिएका छन् । आज युथ फोर्सको भ्याली कमान्ड गठन गर्दै नेता बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले जियकुमार गच्छदारलाई दश अर्बको भ्रष्टाचारमा दश लाख धरौटीमा छुटाउने खालका काम भएको भन्दै यसको विरुद्धमा आफूहरुले सशक्त अभियान चलाउने पनि चेतावनी दिए ।
केपी ओली नेतृत्वको यसअघिको सरकारले गरेका राम्रा काम र नीतिहरु खारेज गरिए देशभरि आगो बाल्ने उनको चेतावनी छ ।
उनले भने,‘नेकपा एमाले बलियो बनाउन हामीले अध्यादेश ल्याउँदा हाम्रो पार्टीका नेता माधव नेपाल र प्रचण्डहरुलाई उचालेर फेल गराउने काम भयो, र
कांग्रेसले निकै चर्को र लोकतान्त्रिक भाषण गर्ने कांग्रेस, अब एमाले फुटाउने अध्यादेश ल्याउनुभयो भने त्यसको विरुद्ध प्रतिरोध हुन्छ । हाम्रो संगठनले देशभरि आगो बाल्छ ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध महाभियोग ल्याउने सपना नदेख्नसमेत उनले चेतावनी दिएका छन् ।
उनले भने,‘तपाईँहरुले राष्ट्रपतिविरुद्ध महा अभियोग लगाउनेबारे कुनाकाप्चामा बसेर षड्यन्त्र बुन्नुभएको छ भने, त्यो सपना नदेख्नुहोस् ।’
दशै विशेष सिधाकुरामा ९ साक्षत देविहरु! को को हुन हेर्नुस्( भिडियो )
पुजाले रुदै भिनिन “मलाई बुवाको आ‘वाज पनि सुन्न मन छैन (भिडियो हेर्नुस्)
अमेरिका भ्रमणमा एमसिसी प्राथमिकताको लिस्टमा छैन : परराष्ट्रमन्त्री खड्का
कमाउन विदेशिएको एक्लो छोरो खु’ट्टा गु’माएर स्वदेश फर्के पछी।
‘डाक्टर ब’न्ने सपना। स्कुल गएको १ दिनमा यसरी फरर पढने भईन विनिता ( भिडियो)